Waxay Soomaaliya ku soo jirtay muddo dheer xaalad bedeshay qiimihii iyo sumcadii ay laheyd Ummada Soomaaliyeed, waxaana dalka hogaanka u qabtay daneystayaal aan laheyn himilo macnawi ah iyo hadaf saliim ah oo ku saleysan rabitaanka shacabka Soomaaliyeed, kuwaas oo weli hortaagan in la helo dowlad caddaalad ah oo soo celisa sharaftii, karamadii iyo jiritaankii Qaranimadii Soomaaliyeed.
Haddaba, maantay oo la joogo bisha Sebteembar 2004, Soomaaliya ay leedahay Baarlamaan Federaali oo ku-meelgaar ah, isla markaasna la qaban qaabinaayo in la doorto Madaxweynihii Dowlada Federaalka Soomaaliyeed ee ku-meelgaar ah, ayaanu waxanu aaminsanahay doorashadaasi waa xil muqadas ah oo qof walba saaran inuu ka digtoonaado in dib loo doorto kuwii burburka Soomaaliya dhaliyey, hormuudna ka ahaa.
Iyadoo laga amba qaadayo waajibka qof walba ka saaran arrintaas, ayaa Siyaasiyiinta, Odayaasha, Waxgaradka iyo Aqoonyahanada Beelaha Harti, waxay daraasad ku dhisan xaqiiqda ka sameeyeen taariikh nololeedak iyo waxqabadka korneel C/laahi Yuuusuf oo isu sharaxay inuu noqdo madaxweynaha dowlada federaaliga ah ee Soomaaliyeed.
Daraasaadkaas ayaa lagu lafa guray arrimahan:
Cadaalada iyo Sinaanta
Dib u dhiska iyo Horumarinta Arrimaha Bulshada.
Siyaasada, Xiriirka Dadweynaha iyo Arimaha Dibada.
Sifada iyo Qaabka Hogaaminta Xukuumada.
1. Cadaalada iyo Sinaanta
b) Ka dib markii shirka dib u heshiisiinta Soomaaliyeed ka bilowdey Nairobi, kenya, Korneel C/laahi Yuusuf wuxuu is hortaagey inay shirka ka soo qeyb galaan Issimadii lagu yiqiin Harti ee dhabta ahaa oo lagu casumay Shirka, isagoo u arkaayey in aanu ku fushan karin Issimadaas danahiisa gaar ahaaneed, wuxuuna ku bedeshey oo uu samaystey Issimo been abuur ah wuxuuna ku magacaabay (Issimo Harti) si uu danahiisa ugu fushado.
t) Iyadoo la tixraacayo lifaaaqa war murtiyeedaka ay soo saaren Guddiga Fududeynta Shirka Soomaaliyeed ee IGAD ee ku saabsanaa habka xulista xubnaha baarlamaanka iyo waraaqdii dib u sixida qodobka sedexaad ee habka soo xulida xubnaha baarlamaanka ee beel hoosaadyada oo soo baxaday 27 dii bishii Juun 2004, iyo 24 kii bishii Luulyo 2004 ka soo baxday xafiiska Ambassador Kiplagat ee ku saabsaneyd habka soo gudbinmta xubnaha baarlamaanka ee beel hoosaadyada, markii la gaaray awood qeybsiga kuraasta baarlamaanka ee heer Daarood ayaa C/laahi Yuusuf uu ka bixiyey shan (5) kursi guud ahaan kuraastii baarlamaanka ee Harti, wuxuuna abaal dhigasho iyo ha lagaa sheego u siiyey Beelo kale. Wuxuu kaloo fara geliyey oo uu ku xadgudbey habkii iyo nidaamkii loo dejiyey xulista iyo magacaabidda xubnaha baarlamaanka ee Beelaha; Dhulbahante, Warsangeli iyo Dishiishe. Intaa ka dib, laba iyo tobankii (12) kursi ee ku soo aaday Beelaha majeerteen waxaa qol la galay oo qarsoodi ku qeybiyey Korneelka isagoo Beel hoosaadkiisa siiyey todoba (7) kursi, shantii (5) soo hartayna uu ku qortay rag uu isagu wato oo daba dhilif u ah iyadoo uu ku xadgudbey xuquuqda Beel-hoosaadyada Majeerteen lahayeen sida waafaqsan nidaamka ay u dejisey IGAD habka xulista xubnahah barlamaanka ee beel hoosaadyada. Hadaba iyada oo sidaas ah Shaqsigaasi ma u qalmaa inuu noqdo hogaamiye, madaxweyne ama wasiir caadil ah oo Ummada ka saari kara xaalada xun ee maanta ay ku sugantahay?
2. Dib u dhiska iyo Horumarinta Arrimaha Bulshada
b) Lacagta uga soo xaroota Dowlad Goboleedka Puntland dekeda Boosaaso iyo maraakiibta faraha badan ee sida joogtada uga kaluumeysta una jariifa (xaaqa) Xeebaha Puntland oo aheyd in lagu bixiyo mushaarka ciidamada iyo shaqaalaha dowlada, adeegyada arimaha bulshada, mashaariicda horumarineed iwm. Labadan sanadood ee danbe lacagtaas wuxuu ku fushadaa danahiisa gaar ahaaneed, taasina waxay keentay in aan la siin ciidamada iyo shaqaalaha dowlada mushaharooyinkii ay xaqa u lahayeen muddo dheer, keenayna burbur iyo hoos u dhac ku yimi adeegyada bulshada sida; Adeegyada Caafimaadka, Waxbarashada, Amaanka, Wax Soosaarka iwm. Waxaa xusid gaar ah muddan in shacbiga Soomaaliyeed iyo xildhibaanada loo sheego lalana socodsiiyo in C/laahi Yuusuf uu gatay dhulkii iyo dhismayaashii Xeradii Ciidanka Daraawiishta Soomaaliyeed ee ku taalay magaalada Gaalkacyo, wuxuuna ku caanbaxay soo sameynta iyo suuq gelinta lacagta been abuurka ah (Shillin Soomaali).
Hadaba arintaasu waa mid lagu xisaabtami doono marka ay dhalato Xukuumad Soomaaliyeed, sharciguna dhaqan galo.
3. Siyaasada, Xiriirka Dadweynaha iyo Arimaha Dibada.
b) Waxaa jira hey`addo fara badan oo la xiriirey maamulka Puntland si ay u taakuleeyaan waxna uga qabtaan arimaha horumarint bulshada, sida Eyraboorka Boosaaso oo ay maalgalin laheyd Imaaradda Sharjah, 1998 oo uu hor istaagay, maantayna dayuuradaha ay fadhiisan kari waayeen, dadweynihii Puntland ay ku qasabtay iney aadaan Hargeysa, Djabuuti iyo Balidoogle, waxaana sababay wada shaqeyn la`aanta iyo ka qeyb qaadasho la`aanta maamulka madaxda uu u yahay C/laahi Yuusuf, taasoo hada keentay iney dhagaha ka fureystaan hey`addaha samafalka dhibaatooyinka abaaraha ka dhacay Puntland
t) Iyadoo maantay soomaliya u baahan tahay dib u heshiisiin is dhexgel, kalsooni abuurid iyo dib u dhis, ayuu ku hanjabayaa inuu badda ku dari doono cidii isaga ka hortimaada ama aan la xulafa aheyn.
Hadaba waxa leys weydiin karaa nin Gobol maamuli waayey qaran burburay ma maamuli karaa dibse ma u soo nooleyn karaa?
4. Sifada iyo Qaabka Hogaaminta Xukuumada.
b) C/laahi Yuusuf waa kaligii taliye aan jecleen in xukunka iyo talada lala wadago cidna la tashan jecelna inuu xukunka xoog ku heysto ilaa uu ka dhimanayo, taasna waxa cadeynaya ku xadgudubka dastuurka Puntland iyo awooda aan xadidneyn oo uu ku qabsaday kuna heysto Dowlad Goboleedka Puntland, wuxuuna ku caanbaxay inuu aruursado dad aan laheyn aqoon, waaya argnimo iyo tayo maamul.waxayna bulshadu u bixisey �xaabo urursade, xumbo dhaansade�.
t) Waa gacan ku dhiigle askari/macangag ah aanan u carbisneyn inuu dadka ku maamulo hab madani ah kuna caanbaxay isku dirka iyo iska horkeenida Beelaha Soomaaliyeed, taasna waxaa inoo cadeynaya dadkii Aqoonyahanada ahaa iyo Odayashii uu laayey oo ay ka mid ahaayeen, Madaxii Shirkada Towfiiq marxuum Faarax Dheere, Duqii Degmada Qardho marxuum C/risaaq Boobe, Suldaan Axmed Hurre oo wali ay socoto maxkamadiisii iyo isagoo ku diley Dhahar laba (2) Qof, kuna dhaawacay todoba (7) Qof, magaaladana u geystay khasaaro badan.
Gabagabadii, waxaa gacanta xildhibaanada Somaaliyeed ee Baarlamaanka cusub ku jira iney Soomaaliya u horseedaan barwaaqo iyo horumar ama burbur iyo halaag hor leh, taasoo ah iney doortaan dagaal ooge dhiigyacab ah oo ku shaqeeya Eex, Qabiil iyo Dulmi sida Korneel C/laahi Yuusuf ama hogaamiye saliim ah oo isu soo dhaweeya Ummada Soomaaliyeed ee kala fogaatay kuna hogaamiya cadaalad, sinaan, iyo horumar, taas oo lagu gaari karo iney soo noqoto sumcadii iyo jiritaankii Qaranka Soomaaliyeed.
Hadaba, waxaanu xusuusineynaa Xubnaha Baarlamaanka Soomaaliyeed sidii loogu dhaariyey Eebe hortiis iney danta guud ee qaranka ay ka hormariyaan dantooda gaarka ah oo ay ka shaqeeyaan sidii loo dooran lahaa dowlad cadaalad ah oo danta dalka iyo dadkaba u shaqeysa.
F.G.: waxaa ku lifaaqan magacyada saxiixayaasha war saxaafadeedkan
Waxaana magacyada oo buuxa lagala xiriiri karaa: